Uncategorized Archives - iftineducation.com
Daawo:Film Xigmad Badan Oo laga Sameeyey Guurka Deg-Dega Ah Ee Dhalinyartu Si Kacsigu Uga Yaraado Ay U Guursadaan
Filmkani waxa waxa isku hawlay abwaanin somaliyeed oo aad ubadan waana filma xikmad ku fadhiya qofkii fahma waxanad halkaa ka fahmaysaa in haddii a=kacsi dartii aad u guursato o aanad mustaqbal ka fikirin inuu guurkaasi burburayo Riix Halkan Oo daawo Muuqalka Filmka Daawo:Film Xigmad Badan Oo laga Sameeyey Guurka Deg-Dega Ah Ee Dhalinyartu Si Kacsigu Uga Yaraado Ay U…
Daawo Galmada qaabka lug is dhaafsiga oo haweenka dabada dhid ka keenaan iyo Biyo kulul Hadaawan hadii aad Reera siigo tahay
Ragga ayaa la ogaaday in ay raaxo waali ah ka helaan codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ay sameeyaan dumarka Xiliga loo diyaar garoobayo galamada oo ay socato baashida ama istiminta. Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ay ceeyb tahay haddii ninkeedu uu maqlo iyadoo sameeneyso codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ka dhasha Macaansiga baashida ama galmada…
Nin yahow Hadii aad Naagtaada Astaantaan ku Aragtid si degdeg ah uga carar oo iska fur Hadii kale naftaada ayaa qatar galeyso
Nin yahow Hadii aad Naagtaada Astaantaan ku Aragtid si degdeg ah uga carar oo iska fur Hadii kale naftaada ayaa qatar galeyso Furiinku waa arin dabiici ah hadana alaaba ku dhaca sabab, Qurbo magazine ayaa kusoo bandhigaya sababaha oogu waa weyn ee keena furniinka. Galmada oo si fiican looga dhergin: haddii uuna ka dhergeynin ruux ka mid ah laba isqaba…
waxaan lahaa saaxiib aan ujeclaa si dheeraad ah. waxaa ifarax galin jiray aragtidiisa waxaana wehel ii ahaa imaanshihiisa waxaan ku gutay lasaaxiibistiisa waqti aad udheer. arrinkiisa waxna igama qarin jirin anigana sidoo kale ayaan u ahaa. ilaa aan safray safar fog. waan isku waraaqo dirnay inti muddo ah. intaa kadib waxaa iga go ay farriimihi aan kaheli jiray xaggiisa. waxaa…
gabar sheegtay ineey waligeed kacsan daawo
aadan21 / August 8, 2017
Markii laga hadlayo dareenka dhanka kacsiga dumarka way adagtahay sida ay dhaqsi ku kacsadaan waxay u baahanyihiin mudo in la raadiyo meelaha ugu dhow ay ka kacsadaan. hadaba waxaa soo baxday daraasad muujineesa in dumarka aan sida sahal aan ku kacsan loo helay hab aad u sahlan kana dhib yar habkaasi oo ah inta aan la sameen galmada in ruuxa…
Waxaa jira waxyaabo badan oo raggu aysan u sheegin xaaskooda balse ay si ba’an u doonayaan. Dumarka ilaahay awood uma siin in ay akhriyaan waxa ku jira madaxa ragga. Ragga iyo dumarka Soomaalida ayaa qaasatan ku liita wadahalka. Inta badan lamaanayaasha Soomaalida ma dhex marto sheego macaan ama in ay ka wada hadlaan arimaha reerkooda ee waxay isugu yimaadan in…
1 2 3 … 2,304 Next »